Di iche iche - nke na-aru oru! | Nutri Nri
Nkewapụrụ iche dị n'etiti otu ụzọ slimming nke ahụ adịghị egbochi ụdị nri ọ bụla nke ahụ na-enyekwa onye kpebiri ịgbaso ya ohere rie ntakịrị n'ihe nile, ya mere a naghị ele ya anya dị ka ihe na-egbochi ụdị nri.
Typedị nri a bụ maka ndị ahụ onye choro ifelata na maka ndị chọrọ idebe ya ma zere ijide ole na ole mmezi kilo. Ọzọ m ga-agwa gị ntakịrị ihe banyere nri dissociated ya mere ị nwere ike ịmata ihe niile abamuru ya na ihe ọghọm ya.
1 Njirimara nke nri dissociated
2 Ndi otu nri di iche iche
2.3 Nri protin
2.5 Akwụkwọ nri na akwụkwọ nri
3 Otu esi ejikọ nri na nri dissociated
4 Ihe Nlereanya nke a kwa izu menu nke dissociated nri
5 Ihe oriri na-ekewapụ adịghị mma?
Njirimara nke nri dissociated
Nkewapụrụ iche so n'òtù nri ndị ahụ ha anaghị egbochi ụdị nri ọ bụla n'ime atụmatụ ọnwụ gị. Isi ihe dị otú a na-eri bụ ikewa abụba, ndị na-edozi na carbohydrates ma si otú a zere iwere ha ọnụ n’otu efere.
Site na-iche iche kwuru nri, ahụ na-ewere akụkụ nke abụba o debere nwee ike ịrụ ọrụ zuru oke na mgbakwunye na iwepu nnukwu mmiri mmiri, nke na-enyere aka belata nwee abụba ahụ.
Otu n'ime isi ihe dị na ihu ọma nke ụdị nri a, bụ na ọ na - enyere onye na - eso ya aka ka ọiche otu nri ọ bụla. N'ụzọ nke a, mmadụ kwuru nwere ike iri ihe n'ụzọ zuru ike ma guzozie eguzozi.
Ndi otu nri di iche iche
Dika m gwala gi na mbu, isi atụmatụ nke nri dissociated bụ na ọ na-etinye otu ụdị nri dị iche iche dabere na nri ndị na-ekekọta ya.
Mmiri ara ehi na mmiri ara ehi
Mkpụrụ osisi painiapulu
Akwụkwọ nri na akwụkwọ nri
Mushrooms na ero
Otu esi ejikọ nri na nri dissociated
Mgbe ahụ, m ga-enye gị ụkpụrụ nduzi kedụ ihe ị kwesịrị iso ma a bịa na jikọta nri dị iche iche na nri dissociated:
Nweghị ike ikpokọta nri mara abụba na ndi na-edozi.
Cannotnweghị ike ikpokọta dị iche iche kabohaidret n’otu efere.
Kwesighi ịgwakọta carbohydrates na ndi na-edozi.
Tanto inine dika akwukwo nri ị nwere ike ịgwakọta ha na nri ọzọ ma ọ bụrụhaala na ọ bụghị mkpụrụ.
Ga-erirịrị mkpụrụ osisi na ufọt ufọt usenubọk m̀m or ufọt uwemeyo na-agwaghị nri ọ bụla ọzọ.
Ikwesighi iri protein ma obu carbohydrates n’oge nri abalị.
Dezaati Ọ kwesịrị ịgụnye kọfị, infusion ma ọ bụ yogot ejiri skimmed.
Mgbe ị na-eri nri ị na-enweghị ike ị .ụ ihe ọ drinksụ drinksụ nwere shuga ma ọ bụ juices.
Oriri nke mmanya na shuga.
Ihe Nlereanya nke a kwa izu menu nke dissociated nri
Aga m egosi gị ọzọ ihe nlere nke menu nke ahụ nwere ike ịbụ ntọala maka ihe ọ chọrọ nri dissociated.
Mọnde: Nri ụtụtụ a nnukwu efere nke muesli na mmiri ara ehi na infusion nke ahihia ndu. Na etiti ututu i nwere ike inwe otu otu mkpụrụ osisi. Iri pasta na akwukwo nri na yogot ejiri skimmed. Snta nri na mkpụrụ osisi. Maka nri abalị salad na-acha akwụkwọ ndụ, azu azu na ntinye.
Tuzdee: Nri ụtụtụ nri mmanụ olive na kọfị. N’uhuruchi otu mkpụrụ osisi. N'oge nri ehihie butere anụ ọkụkọ na akwụkwọ nri na yogọt a kpụrụ akpụ. Inwe infusion maka nri. Na nri abalị oge a scrambled akwa na akwụkwọ nri na ntinye.
Wenezdee: Na nri ụtụtụ ị nwere ike iri ọtụtụ sausaji na-esote infusion. N’uhuruchi otu mkpụrụ osisi. Iri a legume na salad akwukwo nri tinyere yogọt ejirila skim. A bịa n’inwe nri, otu mkpụrụ osisi. Maka nri abalị a akwukwo nri bido ighe, a prawn french omelette na ntinye.
Tọzdee: Maka nri ụtụtụ ị nwere ike iri ụfọdụ ọka ya na yogot na-esote a red tea infusion. N’uhuruchi otu mkpụrụ osisi. N'oge nri ehihie a efere nke toki stew na ntinye. Snta nri na mkpụrụ osisi. Maka nri abalị akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ salad yana steamed clams na organic yogot.
Fraịde: Maka nri ụtụtụ ụfọdụ cheese-free-cheese yana yogot organic na infusion. N’uhuruchi otu mkpụrụ osisi. Iri nri ụfọdụ macaroni na ero na mmiri yogọt. Snta nri na mkpụrụ osisi. Maka nri abalị ntakịrị salmọn emere imi na yogọt a kpụrụ akpụ.
Satọde: Na nri ụtụtụ ị nwere ike iri tost na mmanụ oliv ya na yogot ejiri skim na infusion. Inwe otu nkpuru maka nri ehihie. N'oge nri ehihie anụ a kụrụ n'ọkụ ya na akwukwo nri sauteed na infusion. Snta nri na mkpụrụ osisi. Maka nri abalị omepara asparagus na ntinye.
Sọnde: N'oge nri ụtụtụ otu iko muesli jiri yogot skimmed na infusion. Maka nri ehihie otu mkpụrụ osisi. Iri nri a efere nke toki stew na akwụkwọ nri na yogọt skim wara. Snta nri na mkpụrụ osisi. Na nri abalị ị nwere ike iri a akwụkwọ nri ofe tinyere ụfọdụ mọsel na-agba mmiri na infusion.
Ihe oriri na-ekewapụ adịghị mma?
Dị ka ọtụtụ ndị na-edozi ahụ si dị, nri ahụ ekewapụrụ bụ zuru okè ibu ọnwụ atụmatụ ifufu ole na ole kilos n’enweghi oke agu na a zuru ezu ọkọnọ nke ahu nke ahu. O doro anya na achọpụtaghị isi ihe ịga nke ọma na nri a n'ịkewapụta ụdị nri dị iche iche, ma ihe mere o ji dị irè na-adabere na ya obere caloric oriri na mmachibido oriri nke ngwaahịa dị iche iche na-emerụ ahụ dịka nke a bụ ihe gbasara shuga ma ọ bụ mmanya.
Agbanyeghị, n'okpuru Ana m ahapụrụ gị vidiyo n'ihi na olee ụkpụrụ ma ọ bụrụ na ọ bara uru ịmalite nri a na hapụ ndị mmefu pound wee laghachi na onu ogugu gi mbu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Nutri Nri » Ahụike » Nkewapụrụ iche
Ndụmọdụ iji kpalite uto ntutu